I-Taurus kunye neGemini-Ukuhambelana kwiSini, Uthando kunye noBomi - Itaurus
Taurus kunye neGemini
Ukuhambelana kweTaurus kunye neGemini kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembela. x
Taurus kunye neGeminiUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
I-Taurus luphawu loMhlaba olunemvakalelo enesidingo esinzulu sokuchukunyiswa ngokomzimba kunye nolonwabo lwazo zonke izivamvo zomzimba. I-Gemini idinga ukukhuthazwa kwengqondo kwaye ayikhathaleli kangako malunga nokuchitha ixesha kwiingalo zomntu. Akunjalo ukuba abanaso imfuneko yokuchukunyiswa, sonke sinayo, kodwa kufuneka bazi ukuba bayathandwa kwaye bamkelwe ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kwaye ukuchukumisa ngomnye wabo. Emva kwayo yonke loo nto, enye yeempawu zoMoya kwaye kwiingcamango zabo zehlabathi kufuneka zixakeke, ngelixa unxibelelwano oluqinileyo luyinto enika ithuba lokuphila kakuhle ngokwesondo.
Ngelixa iTaurus inokuhlala ekhaya, ebhedini, bonke abade, bebambene nesithandwa sabo kunye nokuyalela ukutya, uGemini angathanda ukuphuma kwaye abe nobudlelwane kuzo zonke azikho iindawo ezisondeleyo. Ubomi babo bokwabelana ngesondo bunokuba ngumthombo weengxaki zabo ezininzi, nje ukuba iGemini idikwe okanye iTaurus icaphukiswe kukunqongophala kokubaluleka kweemvakalelo.
Taurus kunye neGeminiThembela
Ukuthembana kunokuba ngumbandela wokwenene kwesi sibini. I-Gemini ayikho yonke into ethembekileyo xa umntu ezama ukuzibopha. I-Taurus, kwiimeko ezininzi, iphilela imini apho baya kuboshwa kunye nomntu ngaxeshanye. Ukuba abaqali ubudlelwane babo kwisiseko esicacileyo nesiyinyani, apho into yokuqala abayifundayo omnye komnye iya kuba yinqanaba lokuzibophezela ngamnye wabo afuna, ingxaki yokwenyani iya kuvela ngokulula.
Iqabane leGemini liya kuqalisa ukucinga ngezizathu zokuphuma kuyo nayiphi na imbopheleleko ebekwe kubo nguTaurus, kuphela ukuphepha ukulimaza iimvakalelo zabo. Ekuphenduleni, i-Taurus iya kuziva into engalunganga kwaye iqale ukuxhalaba malunga nokuziphatha kweqabane kunye nezinto abazithethayo. Oku kunokufikelela kwinqanaba lokungathembani ngokupheleleyo phakathi kwabo, ngakumbi ukuba iTaurus iba nomsindo ngokwenene kwaye iziphindezele ngendlela eqhelekileyo yokungenzi nto kunye nenkani.
Iinjongo zeGemini zihlala zichazwa kakubi apha kwaye oku kunokukhokelela kwiimeko ezininzi ezilandelayo eziza kubalimaza bobabini. Kubaluleke kakhulu ukuba baxoxe ngokweenkcukacha malunga nento abanqwenela ngayo bobabini ngelixa ubudlelwane babo bukhula. Ngale ndlela, babenokuthintela ukungaqondani okunokukhokelela ekungathembeni okungenakulungiseka.
Taurus kunye neGeminiUnxibelelwano kunye nengqondo
Taurus luphawu olwandulela iGemini. Kwingqiqo yeenkwenkwezi, oku kusixelela ukuba uphawu lwe Gemini ngekhe ibekho ukuba iTaurus ibingekho. Ngokwenene, oku kuthetha ukuba iqabane leGemini aliyi kwenza lukhulu ukuba iimfuno zabo zomzimba azizange zihoywe. Kulapho ubudlelwane babo bunonxibelelwano oluluqilima, kuba iqabane leGemini linokufuna umntu ofana neTaurus ukuba anyamekele umzimba wakhe kunye neemfuno zawo.
Kulula kakhulu kuphawu loMoya olufana neGemini ukulibala ukutya isidlo sasemini okanye ukulala iiyure ezimbalwa ngobusuku. Zininzi izinto ezinomdla emhlabeni abangafuni kuziphosa. Umlingani weTaurus unokupheka ukutya okunempilo, ukunyamekela iimali zabo kwaye agxininise kwishedyuli yemihla ngemihla eya kunika iGemini yabo isiseko esinamandla sokutyalomali kwiingcamango zabo.
Ngokubanzi, izinto abazithandayo azifani kangako, kodwa banokufumana indlela yokunxibelelana, kuba akukho namnye kubo ongenabunono kunye nendlela yokuthetha. Ukuba iqabane leGemini lithatha isigqibo sokucotha kancinci kwaye iTaurus ivula, banokufumanisa ukuba kunokwenzeka ukuba bonwabe kunye. Emva koko, zilawulwa yiVenus kunye neMercury, iiplanethi ezimbini zangaphakathi, xa zidibene, zijongene nokuzonwabisa, ukuthetha okumnandi kunye nobugcisa bencoko.
Taurus kunye neGeminiIimvakalelo
Akunakwenzeka ukuba babelane ngeemvakalelo zabo ngokulula kwaye bayonwabele omnye komnye ngendlela abanokuthi bayenze nabanye abameli bezodiac. Sekunjalo, kukho icala elithambileyo kwiTaurus elinokunyibilikisa nezona ntliziyo zibandayo. Kwiimeko ezininzi, ithuba labo elihle lobudlelwane bothando likuthando oluvakalelwa nguTaurus. Asiyi kuthetha ukuba iGemini ayinamvakalelo okanye ayinamvakalelo, kodwa ngokuqinisekileyo banendlela eyahlukileyo kwindalo yabo yeemvakalelo kunomqondiso woMhlaba weTaurus, ophakamisa iNyanga.
Xa iTaurus ithandana neGemini, baya kwenza nantoni na ukuqonda ubunjani babo. Akukho nto indalo ethambileyo yeTaurus ayinakuyiqonda, nangona kunjalo yahluke kumlingiswa wabo wokuqala. Xa iGemini yabo ivakalelwa ngolu hlobo lunzulu noluzinzileyo lokuqonda, banokusabela ngendlela efudumeleyo neyobuntwana, befunda ukuba banokukhululeka naxa bethandana nomntu ofana noTaurus.
Taurus kunye neGeminiImilinganiselo
Ngoxa i-Taurus ixabisa uMhlaba, ihlabathi lezinto ezibonakalayo, iimvakalelo zabo kunye noko kuzinzile ebomini babo, i-Gemini ixabisa i-Universe, ihlabathi leengcamango, ingqondo yabo enengqiqo kunye noshintsho. Kulapho iiyantlukwano zabo kunye neempawu zendalo zahluka kakhulu. Kufuneka bazame ngenene ukwamkela ixabiso lokwenyani lamazwe abo omabini ukuze balungise iiyantlukwano zabo.
Taurus kunye neGeminiImisebenzi ekwabelwana ngayo
Babenokufumana izinto abanokuzinandipha kunye, kodwa kungekhona ngesantya esifanayo. I-Gemini ithanda izinto ngokukhawuleza, ngelixa inomdla, kwaye iTaurus ingathanda ukuhlolisisa yonke into ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni, ibeka ixabiso kumsebenzi ngamnye kwaye igqibe ngokucokisekileyo ukuba ingaba bafuna ukuyiphinda okanye cha. Oku kuya kubaphambanisa iGemini yabo. Kungcono ukuba bobabini bahambe, kakhulu, kuba oku kunokugcina i-Gemini isekelwe, ngelixa i-Taurus isoloko idinga ukunyakaza ukuze ingapheli kwi-static, inert, i-horizontal state. Banokudibanisa indalo yabo enomdla ngokusebenzisa uhlobo oluthile lobugcisa, ngakumbi ukuba bakwazi ukufumana indlela yokudala into kunye. Ngeengcamango zeGemini kunye nengqiqo ye-Taurus, idibene nesidingo sobuhle, oku kufuneka kube ngumsebenzi oyinyaniso wobugcisa.
Ubudlelwane phakathi kweTaurus kunye neGemini ayiniki sithembiso esikhulu ukuqala. Sekunjalo, umgangatho omiselweyo wophawu lweTaurus unokubanika ukunyamezela okwaneleyo kunye nokunyamezela ukuze bahlale kwinjongo yabo yokuba neGemini, ixesha elide ngokwaneleyo ukuba bazane ngokwenene. Nangona amathuba abo okudibanisa ukungafani kwabo kuncinci, ukuba iqabane leTaurus libeka intliziyo yabo yonke, banokulawula ukuba yinxalenye ebalulekileyo yobomi babo beGemini njengesiseko sabo kunye nokuthembeka kwabo kuyo yonke into abayenzayo. Kwimeko apho bamkelana ngokupheleleyo, iTaurus iya kunika iGemini uxhulumaniso lwabo kwiplanethi yoMhlaba, emzimbeni wabo kunye nenkqubo yabo yemihla ngemihla, ibanika isiseko sempilo kunye nokusebenza okuqhelekileyo. Ngembuyekezo, iGemini iya kunika amaphiko eTaurus kwaye, ngcono kunjalo, ibafundise indlela yokubhabha.
Leo Aries Gemini Khetha Uphawu Virgo